Uyicwangcisa njani iWebhusayithi yakho eNtsha | Martech Zone
Uyicwangcisa njani iWebhusayithi yakho eNtsha
NgoLwesithathu, Matshi 5, 2014 NgoLwesithathu, Matshi 5, 2014 Douglas Karr
Sikhona sonke… indawo yakho ifuna ukuvuselelwa. Nokuba ishishini lakho libuye labuya kwakhona, isiza siye saguga kwaye sakudala, okanye ayiguquli iindwendwe ngendlela oyifunayo nayo. Abathengi bethu beza kuthi ukuba bandise uguquko kwaye sihlala sithatha inyathelo ukubuyela umva kwaye sibaqalele kwakhona bonke ubume bewebhu ukusuka ekutshiseni uphawu ukuya kumxholo. Sikwenza njani oku?
Indawo yewebhu yahlulwe yaziindlela ezi-6 eziphambili, ekufuneka zichazwe ukuze wazi ukuba uvela phi kwaye zithini iinjongo zakho:
iqonga - zeziphi iitekhnoloji ezisetyenziswayo, ukubamba, amaqonga, njl.
Ubunkunkqele - indlela indawo yakho ehlelwe ngayo.
umxholo - loluphi ulwazi ekufuneka lubonisiwe kwaye njani.
abasebenzisi - ngubani ongena kwisiza kwaye njani.
Iimbonakalo -Iziphi izinto ezifunekayo ukuguqula abathengi ngokufanelekileyo.
Imilinganiselo -Uyilinganisa njani impumelelo yakho okanye iindawo zokuphucula.
Kukho imilinganiselo eyahlukeneyo kwindawo kunye nendlela ezidityaniswe ngayo neendlela zakho zokuthengisa zedijithali. Isayithi elitsha lihlangabezana njani nezi ndlela:
uhlobo - inkangeleko, imvakalelo, imibala, iifonti, uyilo, amagama, njl njl.
Iifowuni zokuSebenza - zeziphi iindlela zokuguqula kwaye abantu baya kufika njani apho?
Imihla yokuLungisa -Bazokuguqula phi abantu kwaye liliphi ixabiso lolo nguqu? Ngaba ikhona iCRM okanye ukuDibanisa ukuZenzekelayo ukuDibanisa?
umxholo Ulwazi lwencwadana, iinkcukacha zenkampani, abasebenzi, iifoto, imiboniso, i-infographics, amaphepha amhlophe, ushicilelo, izicelo zedemo, iimeko zomsebenzisi, ukhuphelo, iiwebhu, iividiyo, njl
Imeyli -Babhalisela phi abantu, ulawula njani ukubhaliswa kunye nemigaqo ye-SPAM.
ukufuna -Iqonga, uphando lwamagama aphambili, ukwakhiwa kwephepha, iingcebiso zomxholo, njl.
Social - ii-snippets, amaqhosha okwabelana kunye nokunxibelelana kubukho bezentlalo kufuneka zidityaniswe kwaye zikhuthazwe kuyo yonke indawo.
PHAWULA: Ukusebenzisana okuphuculweyo, sebenzisa umxhasi wethu isixhobo sokucinga ukwenza imephu kunye nokuguqula isikhundla solawulo kunye neenkqubo zokugcina izinto zilula kwaye ziququzelela yonke imisebenzi ngaphakathi konqakrazo olungena kwisayithi.
Ngaphakathi kwesi sicwangciso ngasinye, zithini iinkcukacha
Yenzani indawo okwangoku oyifunayo qhubeka nokwenza?
Yintoni le ndawo ikhoyo ayenzi le ndawo intsha kufuneka uyenze?
Yintoni le ndawo ikhoyo ngoku engakwenziyo kuhle ukwenza Kwisiza esitsha?
Ngalinye lala macebo, phuhlisa amabali omsebenzisi ngamnye wabasebenzisi kunye nendlela abanxibelelana ngayo nesiza. Yahlukanise kufuneka uyenze kwaye intle ukuyenza. Ibali lomsebenzisi yinkcazo etyebileyo yendlela umsebenzisi anxibelelana ngayo kwaye anokusetyenziselwa uvavanyo lokwamkelwa. Nanku umzekelo:
Umsebenzisi uyakwazi ukungena ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, ubhalise kwisiza, kwaye ufumane iphasiwedi ukuba akaziwa. Ubhaliso ludinga igama lomsebenzisi, igama elipheleleyo, idilesi ye-imeyile kunye negama eligqithisiweyo (indibaniselwano yamatyala asezantsi, icala eliphezulu, amanani kunye neesimboli). Ukuqinisekiswa kwe-imeyile kufuneka kubandakanywe ukuqinisekisa ukuba kusetyenziswa idilesi ye-imeyile efanelekileyo. Umsebenzisi kufuneka akwazi ukuguqula iphasiwedi nanini na ngaphandle kwenkxaso.
Ngoku singena kwi-nitty gritty… uneenkcukacha zesiza sakho, ukuba abasebenzisi basebenzisana njani nayo, kunye neemfuno zesiza esitsha kunye neemfuno. Ukuphuculwa kokuphindaphindeka kubalulekile - ukubeka phambili amanqaku kunye namabali abasebenzisi ukuze wazi ukuba yintoni ekufuneka yenziwe kuqala ngento elungileyo ukuba nayo. Qalisa ukucinga ngeenjongo kunye nezixhobo ukuseta ulindelo kwinto oyifunayo kwaye uyifuna nini.
Inventory indawo yamaphepha. Rhoqo, sisebenzisa iscraper ukwenza lula oku.
Ngephepha ngalinye, chaza ukuba loluphi uhlobo lwephepha template iya kufuneka ukubonisa iphepha ngokufanelekileyo.
Ukuphuhlisa iifayile zefowuni ukumisela ubeko lwephepha kunye nokuhamba.
Ukuba ukubalwa kwephepha kuya kuncitshiswa (kuhlala kucetyiswa), uya kuba phi ezingo- amaphepha akhoyo ukuze ungaphazamisi abasebenzisi kunye nokhangelo? Imephu onke amaphepha akhoyo kunye neendawo ezintsha.
Phuhlisa umxholo ukufuduka cwangcisa ukufumana onke amaphepha akhoyo kubeko lwamaphepha amatsha ngokusebenzisa i-CMS entsha. Oku kunokuba yinto enoburharha… ifuna umfundi ukuba akope kwaye ancamathisele. Okanye inokuba sisiseko sedatha esiguquliweyo esibhaliweyo ukungenisa ulwazi.
Yakha i-matrix ye abasebenzisi, amasebe, ukufikelela kunye neemvume ngephepha kunye nenkqubo. Zahlulele kwisidingo sokuba nezinto ezintle ukuba nazo.
Yakha isicwangciso sakho
Yonke into ekufuneka yenziwe inokuba no (ngubani onoxanduva), yintoni (eyenziwayo ngokweenkcukacha), njani (ngokuzithandela), nini (kuqikelelwa umhla wokugqitywa), ukuxhomekeka (ukuba omnye umsebenzi kufuneka wenziwe kuqala), kunye nokuphambili (kuhle ukuba , Ndifuna ukuba).
Yazisa abasebenzisi kwaye ufumane isivumelwano sabo kwimisebenzi kunye namaxesha.
Yiba bhetyebhetye kunye nezixhobo ezisekondari, ukusebenza kunye nokuphinda ubeke phambili.
Unomphathi weprojekthi ophakathi olandelela, uhlaziya kunye neengxelo mihla le.
Yakha i-buffers phakathi kokujongwa kwabaxumi kunye nemihla yokugqitywa kwakho kunye nexesha elininzi lokwenza uhlengahlengiso okanye uhlengahlengiso. Ukuba kuye kwaziswa amanqaku amatsha (ukunyuka komda), qinisekisa ukuba umthengi uyaqonda ukuba amaxesha anokuchaphazeleka njani kwaye zeziphi iindleko ezongezelelekileyo ezinokubakho.
Bonisa kunye nomxhasi kwindawo yokuma kwaye uhambe amabali omsebenzisi ukwamkelwa.
Hlanganisa kubahlalutyi kwindawo yonke yokulandela umkhondo, ulawulo lwephulo kunye nemilinganiselo yokuguqula.
Nje ukuba wamkelwe, beka indawo ngoku, uqondise ukugcwala kwabantu abadala. Bhalisa indawo kunye neenkosi zewebhu.
Thatha umfanekiso wamanqanaba kunye kubahlalutyi. Yongeza inqaku kuLuhlalutyo ngomhla wokulungiswa kwesiza.
Yenza isicwangciso sakho! Nje ukuba isiza silungile
yeSistim indawo yangoku, isiseko sedatha kunye nayo nayiphi na impahla efunekayo.
Misela i cwangciso so kuba xa izinto zingahambi kakuhle (kwaye ziya kuthi).
kwiShedyuli umhla / ixesha 'lokuya bukhoma' kwindawo apho abasebenzisi bengenachaphazeleka.
Ukuqinisekisa ngabasebenzi abaphambili wazisiwe ukuba kukho iwindow apho isiza sinokuthi singafumaneki- kubandakanya abathengi.
Yibane isicwangciso sonxibelelwano endaweni yokuqinisekisa ukuba wonke umntu uyafikeleleka ngefowuni okanye ngengxoxo.
Beka indawo entsha phila.
uvavanyo amabali omsebenzisi kwakhona.
Ukuqalisa isiza ayisosiphelo. Ngoku kufuneka ubeke iliso kwinqanaba, abaphathi bewebhu kunye kubahlalutyi Ukuqinisekisa ukuba isiza senza njengoko ubucwangcisile. Xela zonke iiveki ezi-2 kwiiveki ezi-6 ukuya kwezi-8 ngenkqubela phambili. Yenza izicwangciso kwaye uhlaziye iiprojekthi ngokufanelekileyo. Umnqweno omhle!
tags: backupisicwangciso sonxibelelwanoukufudukaucwangciso lwesiza esitshaiplanicwangcisoyogcino lwendawoukufuduka kwesizaamabali omsebenzisikuyilo webIsicwangciso sokuyilwa kwewebhuifayile
Iindlela eziPhezulu eziya kuthi zenze ukuThengiswa kweDijithali
Amadoda ngokuThenga kwabasetyhini kwi-Intanethi
Mar 12, 2014 ngo-7: 21 AM
Ukonakala okukhulu kokucwangcisa indawo! Ngokuqinisekileyo nganye yezi ndawo ivumela ingxoxo eyongezelelweyo.
Oku kuya kuba kuhle kuthotho .....
Mar 12, 2014 ngo 2:48 PM
Masiyenze! Mhlawumbi i-infographic kunye nephepha elimhlophe elibhaliweyo?